Kufezeka iphupho uMoon esayinwa iqembu laseSweden - Impempe
Kufezeka iphupho uMoon esayinwa iqembu laseSweden
Akuzange kumephule umoya ukuthi izinto azizange zihambe kahle ngesikhathi eyohlolwa ikhono eScotland eminyakeni edlule uRyan Moon, yingakno kungethusi ukuthi ugcine elifezile iphupho lakhe.
Lokhu kushiwo inkampani ebhekele izindaba zikaMoon kulandela ukuthi iStellenbosch FC imemezele ukuthi lo mgadli waseMphithi usendleleni ebheke eSweden.
Le nkampani ezinze eScotland ithi uMoon uphatheke kabi ngo-2019 ngesikhathi eshaya igoli elihle eyohlolwa kodwa wagcina engazange asayine eqenjini ebelimhlola.
Yize kumpathe kabi lokhu kodwa ubelokhu efunga ukuthi uzogcina elitholile ithuba lokudlala e-Europe.
“Yingakho kuthe uma kungalungi eScotland waya kwiStellenbosch ngoba ilona iqembu ebelimthembisa ukuthi ngeke lime endleleni yakhe uma ethola amadlelo aluhlaza,” sisho kanje isitatimende.
Lo mgadli wakudala weKaizer Chiefs oneminyaka engu-24 ubudala uzolifulathela leli ngoLwesine esebhekise amabombo kwiVarbergs BolS FC.
Leli qembu lidlala esigabeni esikhulu eSweden kanti uMoon oke wadlala nakwiMaritzburg United neKaizer Chiefs ulijoyina nje kubhekwe lukhulu kuyena.
“Kuyisibusiso kithi ukubona iphupho lomfana omcane lifezeka. Akukaze kufihlwe ukuthi uRyan uphupha ngokuyodlala phesheya kwezilwandle (njengoba kufanele benze bonke ontanga yakhe) manje uma sekwenzeka nakanjani kufanele simjabulele.
“Simfisela okuhle kodwa futhi asikungabazi ukuthi uzomelana nakho konke azobhekana nakho e-Europe,” kusho uSteve Barker weStellies.
Kusemqoka ukuthi lo mdlali asheshe awele ukuze kuzobonakala nokuthi imigomo ye-Covid-19 yaseSweden ithi kufanele azithukuse (ngayedwana) isikhathi esingakananani ngaphambi kokuhlangana nozakwabo abasha. Usayine inkontileka yeminyaka emithathu.
Previous Previous post: Kuqaqamba inhliziyo ukubuka iMaritzburg iphenduka ompushana kade yethembisa kanje
Next Next post: UJunior Khanye usesungule iqembu lakhe, ufuna ukufana noKaizer Motaung